Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Sweden oo Doortay Xoghaye Cusub
OYSU Sweden oo Doortay Xoghaye Cusub
Posted by ONA Admin	/ February 10, 2013
Shalay oo ay taariikhdu ahayd 09/02/2013 ayaa xafiiska jaaliyada Sweden gaar ahaan caasimada Stockholm waxaa isugu yimid dhamaan xubnaha ururka OYSU, ururka haweenka & Jaaliyada guud ee Sweden. Kulaankaas oo ahaa mid xamaasad badan ahmiyad weeyna lahaa ayaa abaarahii 01:00 pm duhurnimo ay xubnaha meel kuwada qadeeyeen, kadib abaarihii 03:00 pm galabnimo ayuu sitoos ah u furmay shirkii.
Sidii caadada inoo ahayd waxaa ayaada quraana ku furay Sh Nuur Ilkacase kadibna loo istaagay heesta calanka.
Shirka oo uu daadihinayay halgame Abdi Shukri Faliir ujeedada shirkana ay ahayd doorasho maamul cusub OYSU-Sweden masuuliyiintii 3 sanee soo socota hogaamin lahaa ayaa codbaahiyaha kusoo dhaweeyay xoghayihii horee OYSU-Sweden halgame Amiin Barkhadle si uu uga warbixiyo wax qabadkii OYSU-Sweden mudadii 3 sana ahayd ee uu xilka soo hayay.
Halgame Amiin ayaa sifiican uga warbixiyay wax qabadkii ururka dhalinyarada OYSU-Sweden una sheegay bulshada inuu xilka wareejinayo oo uu ururku yeelanayo laga bilaabo maanta Xog-Haye cusub.
Maamulkii horee OYSU-Sweden ayaa shahaado sharafyo ku abaal mariyay xubnihii shaqa wanaaga sameeyay kadib waxaa codbaahiyaha la wareegay gudigii doorashada ee soo dhisay maamulkii xilka la wareegi lahaa.
Waxaa si toosa loomagacaabay Xog-Hayaha cusub Marwa Ayan Mahdi Baynax & team-keedii la shaqayn lahaa oo dhamaystiran.
Doorashadadii kadib ayay masuuliyiin badan oo madasha shirka joogtay sida Gudoomiyihii horee jaaliyada Sweden halgame Abdinasir Gadhweeyne, hogaanka xalinta qilaafaadka jaaliyada Sweden halgame Mustafe Abdirahman (Ilbugle) & qaar kaloo badan ayla dardaarmeen maamulka cusub ee mudada 3-da sana ah hawadin doona OYSU-Sweden.
Waxaa sidoo kale qudbad dhaxal gal ah usoo jeediyay gudoomiyaha jaaliyada Sweden mudane Haybe oo dhalinta ku booriyay inay layimaadaan wax qabad taya leh firfircooni & dadaal una balan qaaday goor walba & waqti walba inay garab taagnaanayaan hiil & hooba.
Gabagabadii shirka ayaa waxaa soo xidhay halgame xildhibaan Riyaale Xaamud oo goob joog ka ahaa shirka uguna bishaareeyay xubnaha guulaha CWXO ay gaadheen & dhamaan jaaliyadaha reer Ogadenia ee caalamka ka dhisan, sidoo kale waxuu ku war galiyay xubnaha isku dayga cadawga & fashilaada ku timaada hadiyo goor sida isku daygii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka kenya laguna afduubay masuuliyiinta JWXO.
Xildhibaanka oo soo jeediyay qudbad aad loogu diirsaday meela badana taabanaysay ayaa kor u qaaday moralka xubnaha una sheegay xaqa & baadilku kol walba xaqa inuu sareeyo hawlaha ay wadaana ay xaq yihiin loogana baahan yahay inay sii laba jibaaraan.
Isku soo wada duuduuboo kulankii doorashada OYSU Sweden ee shalay ka dhacay xarunta jaalidaya Sweden ayaa waxuu kusoo gabagaboobay si habsaimaya , rayn rayn & jawi farxadeed.